UZOË QUINN KUNYE NO-ANITA SARKEESIAN BALWA NOBUKHOBOKA KWIINCWADI EZINTSHA - ANITA SARKEESIAN
Isikolo Sobugcisa Bemifanekiso Eshukumayo Kunye Nesayensi
UZoë Quinn kunye no-Anita Sarkeesian balwa nobukhoboka kwiincwadi ezintsha
Zombini uZoë Quinn (owayekwindawo ephambili yeGamerGate) kunye noAnita Sarkeesian (owangena kwi-maw's gap) bajongana nenkunkuma eninzi eshushu ezandleni zabantu ababelana ngesondo kwi-Intanethi (nakwi-IRL) abanezisombululo kwabasetyhini abanamazwi kwiindawo ezikwi-intanethi kukuhlukumeza nokuhlukumeza. Bonke baya kuba nelungelo lokukhalaza kwaye babe nomsindo. Endaweni yoko, basebenzisa amava abo ukwenza iiprojekthi zepetroli ezenza ukuba abanye abafazi bajolise.
Incwadi entsha kaZoë Quinn, UkuGqitywa kokhubekiso , yinxalenye yesikhumbuzo ngobomi bakhe, izehlo ezikhokelela kwiGamerGate, kwaye kwenzeka ntoni kuye nge-Agasti ka-2014. Nangona kunjalo, njengoko iPolygon yayibeka kwiprofayili yamva nje, incwadi kaQuinn ayilo bali ixhoba. Libali lomlo… Kwiminyaka ukusukela ngeGamerGate, uncede abanye abajamelene nokuxhatshazwa kwi-Intanethi. Walwa iinkundla, kunye nezopolitiko, kumajelo eendaba nakwiZizwe eziManyeneyo. Le ncwadi ngomnye umzuzu kumlo wakhe, ithuba lokuthetha inyani kwabo bamthuthumbisayo, nakwigunya elenza iGamerGate kwaye iqhubeke nokwenza imikhankaso yentiyo kwi-Intanethi.
Nantsi ke into eyenza ukuba le ncwadi ixabiseke ngokwenene. Kude ekubeni ngumcimbi we-yee-is-me, iba yindlela yokubhukisha xa ujongene, kunye nokulwa, ukuxhatshazwa kwi-Intanethi, kwaye ke uQuinn uthatha ukugxila kuye kwaye uzibeka kwinkonzo yabanye abantu basetyhini kunye nabantu abahlelelekileyo uncedo ekujonganeni nengxaki naphina apho ihlala khona.
Uyangqina ukuba ukuba libhinqa, okanye ngezinye iindlela ukubekelwa bucala, kwindawo ye-Intanethi ayisiyongxaki, kwaye akukho mntu ufanele ukugweba iimpendulo zabo ngokweemvakalelo ekuhlukumezeni ngokusekwe kubungakanani okanye ukuba kuncinci kangakanani ukubandezeleka kwabo. UQuinn ubhala, Akukho 'kufanele' xa kufikwa ekuphenduleni ngokweemvakalelo koku. Ukuziva ukhathazekile okanye ukoyika ayikukuvumela ukuba kufike kuwe. Kubalulekile ukuba wamkele iimvakalelo zakho ukuze uqalise ukuzilungisa… Ukuphathwa gadalala kwi-Intanethi kufana nokufumana ikaka ekutyeni kwakho. Ayinamsebenzi kangako ukuba yi-turd encinci okanye isandwich yonke yekwitshi.
UQuinn ukwaqinisekisa ukunika indawo kubantu abanemibala encwadini ukuze bakwazi ukubalisa amabali abo ngawabo amazwi njengoko evuma ukuba, njengomfazi omhlophe, kukho abanye abaphethwe gadalala kunye ne-vitriol kwi-intanethi ngendlela engasoze yenzeke kuye. Njengoko ingxelo yePolygon, Njengokuba omnye wabaphenduliweyo ebonisa ukuba, akukho nto ithethwayo malunga nokuxhatshazwa ngokwesini kwi-Intanethi ngaphandle kokuthetha ngobuhlanga.
Okokugqibela, ukongeza kule ncwadi, uQuinn usete i Inethiwekhi yokuGqithisa okungaphezulu , uncedo, iqela lokukhuthaza, kunye neziko lezixhobo kuye nabani na ohlangabezana nokuxhatshazwa kwi-intanethi.
Ngeli xesha, incwadi entsha ka-Anita Sarkeesian, Imbali vs.Abafazi , uzinikele ngokupheleleyo kwabanye abantu basetyhini. Ngokukodwa, inikezelwe kumabali abasetyhini abathi, ngelixa babedlala indima enkulu kwimbali, abahoywa kakhulu. Kakhulu kakhulu kwimidlalo yevidiyo yeFeminist Frequency, Abafazi abaQhelekileyo: Ukuzama ukuNqaba iMbali , Imbali Vs. Abafazi Ixelela amabali angamashumi amabini anesihlanu amangalisayo, aqaqambileyo, kwaye anomdla kwabasetyhini kwimbali yonke.
Ngapha koko, enye yeengxaki ezinkulu zikaSarkeesian ekwenzeni le ncwadi yayikukunciphisa ubumnandi phantsi. Njengoko kuchaziwe nguBustle Ababhali bencwadi kuye kwafuneka babe nenceba xa kufikwa kumba wokuba ngubani oza kuba kule ncwadi, ngokutsho kukaSarkeesian, othi [I] andikhathazeki nyani ukushiya umlilo ongacacanga uEmma Goldman, ongazange ayeke ukuxhasa ukuguqula ngokupheleleyo intlalo. I-Sarkeesian ikwalilela ukuba ingamkhupheli ngaphandle uMary Bowser, i-spy ebalekileyo-eyayi-spy ye-Union, ibali layo elisandula ukuqulunqwa ngu-Lois Leveen njengo Iimfihlo zikaMary Bowser . Nangona kunjalo, abasetyhini ababonakaliswayo bayamangalisa ngokulinganayo.
USarkeesian uxelela uBustle ukuba kubalulekile ukubamba amabali abantu basetyhini abangahoywanga abenza izinto ezimangalisayo ngoku, ngaphambi kokuba amabali abo alahlekelwe yimbali. Unika uluhlu olufutshane lwabafazi ekufuneka sigcine iso namhlanje, njengabasunguli beMicimbi yaBantu abaMnyama u-Alicia Garza, Patrisse Cullors, kunye no-Opal Tometi; okanye amagcisa uKara Walker noJudy Baca; okanye owasetyhini ongumdibaniso wokuqala uKimberlé Williams Crenshaw.
Uthi emva koko, Olu luhlu olujolise kumantla eMelika. Xa sibuyela umva kwaye sithatha imiboniso echukumisayo yamabhinqa akrelekrele kwihlabathi jikelele… kuyakhuthaza ngenene. Ukucacisa isihloko se-anthology ephawulekayo yabasetyhini, sonke sinqumla ibhulorho eyakhiwe ngasemva kwabafazi bombala. Kubalulekile ukuba nawuphi na umsebenzi wolu hlobo uqwalasele loo nyaniso.
Kuyamangalisa ukubona ukuba bobabini uQuinn noSarkeesian bazithathe njani izinto abadlule kuzo bazenza amandla okwenza inkonzo kwabanye, bethatha into eqale njengomdla nje kwimidlalo yevidiyo nakwi-intanethi ngelixa ababhinqileyo beyijika umsebenzi wobomi. Ndikulindele phambili ukuzifunda zombini ezi zinto.
UkuGqitywa kokhubekiso nguZoë Quinn iphumile ngoku , ngelixa lika-Anita Sarkeesian Imbali Vs. Abafazi icwangciselwe ukukhutshwa kunyaka olandelayo.
Sabrina Igqwirha Elivisayo
uphele njani umatiloshe wenyanga
Umntu uzibhala ngokwakhe kumantombazana anamandla
Abaphindezeli abantwana bemfazwe engapheliyo engqondweni
Yintoni eyenza imovie yekrisimesi
iprincess bubblegum kunye nearceline comic
isitya esibi somlingisi wentengiso